Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [2.05 MB]
(Myanmar) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်တွင် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို (၁၄.၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၅.၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။